सुपारी सेवन गर्दा यस्तो समस्या हुनसक्छ - ज्ञानविज्ञान
अचेल धेरैको बानी छ खाना खाइसकेपछि सुपारी चपाउने । खाना खानासाथ सुपारीको टुक्रा चपाउने तलतल लाग्छ । कतिले ठान्छन्, ‘सुपारीले खाना पचाउँछ ।’
तर, यो भ्रम हो । किनभने यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने होइन, बरु हानी पुर्‍याउँछ । द इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले सुपारीलाई क्यान्सर गराउने मुख्य तत्वको रुपमा पुष्टि गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुपारीलाई कार्सिनेजेनिक वर्गमा समावेश गरेको छ ।
सुपारीले कसरी स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्‍याउँछ त ?
३. दाँतको समस्या
४. रसायनिक प्रतिक्रिया
५. अन्य साइड इफेक्ट्स
Topics #समस्या #सुपारी
Don't Miss it यसरी राखौं बच्चाको ख्याल जाडो मौसममा
Up Next कसरी खुसी राख्ने प्रेमिकालाई ? यस्तो छ केहि उपाय
मानिसहरु अलैंचीको प्रयोग मसलामा र माउथ फ्रेसनरको रुपमा मात्र प्रयाेग गर्दछन् । चियामा राखिएको अलैंचीले यसको स्वादमा वृद्धि गर्दछ ।…